Iindaba - Ulwelo lwe-Nitrogen yeSicelo seTanki-Ukufuya iSilwanyana esiQonkxwe kwiNdawo yamadlozi
Okwangoku, ukufakwa kwamadlozi angumkhenkce ngokungeyomfuneko kusetyenziswe kakhulu kwimveliso yezilwanyana, kwaye itanki yenitrogen engamanzi esetyenziselwa ukugcina incindi emkhenkceni iye yaba sisikhongozeli esiyimfuneko kwimveliso yasemanzini. Ukusetyenziswa kwenzululwazi nokuchanekileyo kunye nokugcinwa kwetanki yenitrogen engamanzi kubaluleke kakhulu kuqinisekiso lomgangatho wamadlozi agcinwe emkhenkceni, ukwandiswa kobomi benkonzo yetanki yenitrogen engamanzi kunye nokhuseleko lwabafuyi.
1.Isakhiwo setanki yenitrogen engamanzi
Iitanki zenitrogen zolwelo okwangoku zezona zikhongozeli zilungileyo zokugcina incindi yomkhenkce, kwaye iitanki zenitrogen eziyilwelo zenziwe ngentsimbi engatyiwayo okanye ialuminiyam. Isakhiwo sayo sinokwahlulwa sibe yigobolondo, i-liner yangaphakathi, i-interlayer, intamo yetanki, i-tank stopper, ibhakethi kunye nokunye.
Iqokobhe elingaphandle lenziwe ngumaleko wangaphakathi kunye nongaphandle, umaleko wangaphandle ubizwa ngokuba yiqokobhe, kwaye indawo ephezulu ngumlomo wetanki. Itanki yangaphakathi yindawo ekumaleko angaphakathi. I-interlayer ngumsantsa ophakathi kwamaqokobhe angaphakathi nangaphandle kwaye ikwimo yevacuum. Ukuze kuphuculwe ukusebenza kwe-thermal insulation yetanki, izinto zokugquma kunye ne-adsorbents zifakwe kwi-interlayer. Intamo yetanki idibene nemigangatho yangaphakathi nangaphandle yetanki kunye ne-adhesive-insulating adhesive kwaye igcina ubude obuthile. Umphezulu wetanki ngumlomo wetanki, kwaye ulwakhiwo lunokukhupha initrogen eyenziwe ngumphunga yinitrogen engamanzi ukuqinisekisa ukhuseleko, kwaye inokusebenza kokugquma kwe-thermal ukunciphisa ubungakanani benitrogen engamanzi. Iplagi yembiza yenziwe ngeplastiki enokusebenza kakuhle kokugquma kwe-thermal, enokuthi ithintele isixa esikhulu senitrogen engamanzi ukuba singabi ngumphunga kwaye silungise isilinda sesidoda. Ivalve yokufunxa ikhuselwe ngesigqubuthelo. Ipheyile ifakwa kwitanki etankini kwaye inokugcina iisampulu ezahlukeneyo zebhayoloji. I-pail handle ixhonywe kwindandatho yesalathisi yomlomo wetanki kwaye ilungiswe ngeplagi yentamo.
2. Iintlobo zamatanki enitrogen engamanzi
Ngokusetyenziswa kweitanki zenitrogen ezingamanzi, inokohlulwa ibe ngamatanki enitrogen alwelo okugcina amadlozi angumkhenkce, iitanki zenitrogen ezilulwelo zothutho kunye neitanki zenitrogen ezingamanzi zokugcina kunye nokuthutha.
Ngokomthamo wetanki yenitrogen engamanzi, inokwahlulwa ibe:
Amatanki enitrogen angamalwelo amancinci afana ne-3,10,15 L yeitanki yenitrogen engamanzi inokugcina incindi engumkhenkce ngexesha elifutshane, kwaye ingasetyenziselwa ukuthutha amadlozi anomkhenkce kunye nenitrogen engamanzi.
Itanki yenitrogen engamanzi ephakathi (30 L) ifaneleke ngakumbi kwiifama zokufuya kunye nezikhululo zokufakwa kwamadlozi, ezisetyenziswa ikakhulu ukugcina amadlozi angumkhenkce.
Iitanki ezinkulu zenitrogen ezingamanzi (50 L, 95 L) zisetyenziswa ikakhulu ukuthutha nokusasaza ulwelo lwenitrogen.
3. Ukusetyenziswa kunye nokugcinwa kweetanki zenitrogen ezingamanzi
Itanki yenitrogen engamanzi kufuneka igcinwe ngumntu ukuqinisekisa umgangatho wamadlozi agciniweyo. Ekubeni kungumsebenzi womfuyi ukuthatha amadlozi, itanki yenitrogen engamanzi kufuneka igcinwe ngumfuyi, ukuze kube lula ukuqonda nokuqonda ulwelo lwenitrogen yokudibanisa kunye neemeko zokugcina amadlozi nangaliphi na ixesha.
Phambi kokongeza ulwelo lwenitrogen kwitanki yenitrogen engamanzi, qala ujonge ukuba iqokobhe liphindekile na kunye nokuba ivalve yokufunxa ilungile na. Okwesibini, khangela ukuba ngaba kukho nawuphi na umcimbi wangaphandle kwitanki yangaphakathi ukukhusela itanki yangaphakathi ukuba ingagqwali. Lumka xa ufaka ulwelo lwenitrogen. Amatanki amatsha okanye iitanki zokumisa, kufuneka zongezwe ngokukhawuleza kwaye zipholile ngaphambili ukukhusela umonakalo kwitanki yangaphakathi ngenxa yokupholisa ngokukhawuleza. Xa ufaka initrogen elulwelo, inokutofwa phantsi koxinzelelo lwayo, okanye itanki yokuthutha inokugalelwa kwitanki yokugcina ngefunnel ukuthintela initrogen engamanzi ekutshizeni. Unokwenza i-funnel ngeqhekeza le-gauze okanye ufake i-tweezers ukushiya isithuba ekungeneni kwe-funnel. Ukuqwalasela ubude bomgangatho wolwelo, intonga ebhityileyo yomthi ingafakwa ezantsi kwetanki ye-nitrogen engamanzi, kwaye ukuphakama kwenqanaba lolwelo kunokugwetywa ngokobude beqabaka. Kwangaxeshanye, kufuneka kuqatshelwe ukuba okusingqongileyo cwaka, kwaye isandi nitrogen engamanzi ingena itanki sisiseko esibalulekileyo ukugweba itanki nitrogen engamanzi kwitanki.
△ Uthotho loGcino oluzinzileyo-iSixhobo soKhuseleko lokuGcinwa kwezilwanyana △
Emva kokufaka initrogen elulwelo, jonga ukuba kukho iqabaka na kumphezulu ongaphandle wetanki yenitrogen engamanzi. Ukuba kukho nayiphi na into ebonisayo, i-vacuum state yetanki ye-nitrogen yolwelo yonakalisiwe kwaye ayinakusetyenziswa ngokuqhelekileyo. Ukuhlolwa rhoqo kufuneka kwenziwe ngexesha lokusetyenziswa. Ungabamba iqokobhe ngezandla zakho. Ukuba ufumana iqabaka ngaphandle, kufuneka uyeke ukuyisebenzisa. Ngokuqhelekileyo, ukuba i-nitrogen engamanzi isetyenzisiwe i-1/3 ~ 1/2, kufuneka yongezwe ngexesha. Ukuze kuqinisekiswe umsebenzi we-semen ekhenkcezisiweyo, inokulinganiswa okanye ibonwe nge-gauge level level. Indlela yokuweyisha kukulinganisa itanki engenanto phambi kokusetyenziswa, umlinganiselo wetanki yenitrogen engamanzi kwakhona emva kokuzalisa ulwelo lwenitrogen, kwaye emva koko ulinganise ubunzima bayo ngamaxesha athile ukubala ubunzima benitrogen engamanzi. Indlela yokukhangela igeyiji yolwelo kukufaka intonga yegeyiji yolwelo olukhethekileyo emazantsi etanki yenitrogen engamanzi kangangemizuzu eyi-10, kwaye emva koko uyikhuphe kamva. Ubude beqabaka bubude benitrogen engamanzi kwitanki yenitrogen engamanzi.
Ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla, ukuze uqonde ngokuchanekileyo isixa senitrogen engamanzi, ungaphinda ukhethe ukuqwalasela izixhobo zobungcali ezihambelanayo ukujonga ubushushu kunye nenqanaba lolwelo kwitanki yenitrogen engamanzi ngexesha lokwenyani.
I-“SmartCap” iphuhliswe ngokukodwa ngu-Haishengjie ukwenzela iitanki ze-aluminiyam ye-aluminiyam engamalwelo e-nitrogen inomsebenzi wokubeka esweni okwexesha lokwenyani kwinqanaba lolwelo lwetanki yenitrogen kunye nobushushu. Le mveliso ingasetyenziswa kuwo onke amatanki enitrogen engamanzi anedayamitha eyi-50mm, 80mm, 125mm kunye ne-216mm kwimarike.
I-smartcap inokubeka iliso kwinqanaba lolwelo kunye nobushushu kwitanki yenitrogen engamanzi ngexesha lokwenyani, kwaye ibeke iliso kukhuseleko lwendawo yokugcina amadlozi ngexesha lokwenyani.
Iinkqubo ezizimeleyo ezimbini zokulinganisa inqanaba eliphezulu kunye nomlinganiselo wokushisa
Umboniso wexesha langempela lomgangatho wolwelo kunye nobushushu
Inqanaba lolwelo kunye nedatha yobushushu igqithiselwa kude kwilifu, kwaye ukurekhoda kwedatha, ukuprintwa, ukugcinwa kunye neminye imisebenzi inokufezekiswa.
Umsebenzi we-alarm ekude, unokuseta ngokukhululekileyo i-SMS, i-imeyile, i-WeChat kunye nezinye iindlela zokulumkisa
Itanki yenitrogen yolwelo yokugcina isidoda kufuneka ibekwe ngokwahlukeneyo kwindawo epholileyo, ifakwe umoya wangaphakathi, icoceke kwaye icoceke, ingenalo ivumba elikhethekileyo. Musa ukubeka itanki ye-nitrogen engamanzi kwigumbi lonyango lwezilwanyana okanye kwikhemesti, kwaye akuvumelekanga ngokungqongqo ukutshaya okanye ukusela kwigumbi apho itanki yenitrogen engamanzi ibekwe ukunqanda ivumba elikhethekileyo. Oku kubaluleke ngakumbi. Kungakhathaliseki ukuba isetyenziswe nini okanye ibekwe nini, akufuneki ithotywe, ibekwe ngokuthe tye, ibekwe phezulu, ifunjwe, okanye ibethwe. Kufuneka iphathwe ngobunono. Vula isiciko sesivalo setoti ukuphakamisa kancinci isiciko esicothayo ukunqanda isivalo setoti ekuweni kujongano. Akuvumelekanga ngokungqongqo ukubeka izinto kwisiciko kunye neplagi yesikhongozeli sebhayoloji yenitrogen engamanzi, nto leyo eya kubangela ukuba initrogen engumphunga iphuphume ngokwendalo. Akuvumelekanga ngokungqongqo ukusebenzisa iiplagi zesiciko ezenziweyo ukuvala umlomo wetanki, ukuze kuthintelwe uxinzelelo lwangaphakathi lwetanki yenitrogen yolwelo ukuba inyuke, ibangele umonakalo kumzimba wetanki, kunye nengxaki enkulu yokhuseleko.
I-nitrogen elulwelo yeyona arhente ilungileyo ye-cryogenic yokugcina incindi yomkhenkce, kwaye ubushushu benitrogen engamanzi yi-196°C. Amatanki enitrogen yolwelo asetyenziswa njengezikhululo zokufakelwa kwamadlozi kunye neefama zokufuya zokugcina amadlozi anomkhenkce kufuneka zicocwe kube kanye ngonyaka ukuthintela ukubola kwetanki ngenxa yamanzi amileyo, ukungcoliseka kwamadlozi, kunye nokuphindaphinda kwebhaktheriya. Indlela: Okokuqala hlambulula nge-detergent engathathi hlangothi kunye nomlinganiselo ofanelekileyo wamanzi, uze uhlambe ngamanzi acocekileyo; uze uyibeke phezulu kwaye uyomise emoyeni wendalo okanye emoyeni oshushu; emva koko uyikhanyise ngokukhanya kwe-ultraviolet. Ulwelo lwenitrogen aluvumelekanga ngokungqongqo ukuba luqulathe olunye ulwelo, ukuze kuthintelwe i-oxidation yetanki yomzimba kunye nokuhlwa kwetanki engaphakathi.
Amatanki e-nitrogen yolwelo ahlulwe abe ngamatanki okugcina kunye neetanki zothutho, ekufuneka zisetyenziswe ngokwahlukeneyo. Itanki yokugcina isetyenziselwa ukugcinwa kwe-static kwaye ayifanelekanga ukuthutha umgama omde kwindawo yokusebenza. Ukuze kuhlangatyezwane neemeko zothutho kunye nokusetyenziswa, itanki yezothutho ine-design ekhethekileyo yobungqina bokuthuthumela. Ukongeza kwi-static yokugcina, inokuthuthwa kwakhona emva kokuzaliswa nge-nitrogen engamanzi; kufuneka iqiniswe ngokuqinileyo ngexesha lokuthutha ukuqinisekisa ukhuseleko, kwaye ugweme ukungqubana kunye nokungcangcazela okukhulu kangangoko kunokwenzeka ukukhusela i-tipping.
4. Izilumkiso zokugcina kunye nokusetyenziswa kwedlozi elinomkhenkce
Amadlozi angumkhenkce agcinwa kwitanki yenitrogen engamanzi. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba isidoda sintywiliselwe yinitrogen engamanzi. Ukuba kufunyaniswe ukuba i-nitrogen engamanzi ayonelanga, kufuneka yongezwe ngexesha. Njengogcino kunye nomsebenzisi wetanki yenitrogen engamanzi, umfuyi kufuneka aqhelene nobunzima obungenanto betanki kunye nesixa senitrogen engamanzi equlethwe kuyo, kwaye ayilinganise rhoqo kwaye ayidibanise ngexesha. Kufuneka uqhelane nolwazi olufanelekileyo lwamadlozi agciniweyo, kwaye urekhode igama, ibhetshi kunye nobungakanani bamadlozi agciniweyo ngenani ukuze kube lula ukufikelela.
Xa uthatha incindi yomkhenkce, qala ukhuphe isivalo sengqayi usibeke ecaleni. Ukupholisa kwangaphambili i-tweezers. I-tube yokuphakamisa okanye isikhwama se-gauze akufanele idlule i-10 cm ukusuka entanyeni yengqayi, ingakhankanyi ukuvulwa kwengqayi. Ukuba ayikhutshwanga emva kwemizuzwana eyi-10, ukuphakamisa kufuneka kuphakanyiswe. Beka ityhubhu okanye ibhegi ye-gauze kwakhona kwi-nitrogen engamanzi kwaye ukhuphe emva kokucwina. Gquma ingqayi ngexesha emva kokukhupha isidoda. Kungcono ukucubungula ityhubhu yokugcina amadlozi ukuya kumzantsi ovaliweyo, kwaye uvumele initrogen elulwelo intywilisele idlozi elinomkhenkce kumbhobho wokugcina amadlozi. Kwinkqubo yokupakisha i-sub-packing kunye ne-thawing, umsebenzi kufuneka uchaneke kwaye ube nobuchule, isenzo kufuneka sibe nesantya, kwaye ixesha lokusebenza akufanele lidlule i-6 s. Sebenzisa i-tweezers emide ukukhupha ityhubhu ebhityileyo yesidlozi esinomkhenkce kwitanki yenitrogen engamanzi kwaye uvuthulule ulwelo olushiyekileyo lwenitrogen, ngoko nangoko uyibeke ku-37℃ 40℃ emanzini ashushu ukuntywilisela ityhubhu ebhityileyo, uyivuthulule ngobunono kangangemizuzu emi-5 (2/ I-3 yokutshatyalaliswa ifanelekile) Emva kokuguqulwa kombala, sula amaconsi amanzi eludongeni lombhobho nge-gauze oyinyumba ukulungiselela ukufakwa.